चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा स्वदेशमै पढेका ४१% फेल – Online National Network
२० पुष २०७४, बिहीबार ०२:२८
काठमाडौं, २० पुस – नेपालकै मेडिकल कलेजबाट चिकित्साशास्त्रमा स्नातक (एमबीबीएस) गरेका ४१ प्रतिशत डाक्टर अति सामान्य मानिने लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएपछि मुलुकमा हुने पढाइको स्तरमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यति ठूलो संख्यामा चिकित्सकहरू फेल हुनुका पछाडि पढाइको स्तरमात्र नभई एमबीबीएस परीक्षामा हुने अनियमिततालाई पनि कारण मानिएको छ । एमबीबीएस परीक्षामा व्यापक अनियमितता हुने गरेको दाबी गरिएको छ ।
काउन्सिल सम्बद्ध स्रोतका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म नेपालभित्रका कलेजमा पढेका विद्यार्थीको नतिजा यस्तो खराब हुँदैनथ्यो । केही खास मुलुकबाट एमबीबीएस गरेर आउने विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षामा बढी फेल हुने गर्थे । ‘यसमा सबभन्दा बढी विश्वविद्यालयको कमजोरी देखिएको छ, सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई छाडा छोडिराखेका छन्,’ काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले कान्तिपुरसँग भने, ‘योग्यताका आधारमा विद्यार्थीको चयन र परीक्षा प्रणाली कडा भएमा लाइसेन्स परीक्षामा फेल हुनेको संख्या धेरै घट्छ ।’ डा. बाँस्कोटाले अनुगमनका क्रममा विराटनगरमा ९ बजे परीक्षा सुरु हुनुअगावै प्रश्नपत्र खोलिएको पाइएको पनि बताए ।
‘हिजो मात्र एउटा टोली विराटनगरबाट फर्केको छ, त्यहाँ लिइने परीक्षा माछा बजार जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पूरा छाडातन्त्र देखिएको छ, यसरी पढेर पास भएकामध्ये हालको लाइसेन्स परीक्षामा ३८ प्रतिशत मात्र पास भए भने पनि बढी जस्तो लाग्छ ।’ प्रश्नपत्र बाँडेर परीक्षा नसिद्घिएसम्म बाहिरबाट आएका स्वतन्त्र निरीक्षकले निरीक्षण गरिराख्नुपर्ने स्थिति आएको उनले बताए । ‘पैसाको भरमा चिकित्साशास्त्रको पढाइ हुने परिपाटीले पनि चिकित्सकको गुणस्तर प्रभावित भइरहेको छ,’ डा. बाँस्कोटाले भने । उनले अर्को टोली नेपालगन्जमा परीक्षा अनुगमनमा गएको समेत बताए ।
‘यति ठूलो संख्यामा किन फेल भइरहेका छन् भन्नेबारे काउन्सिलले समीक्षा गर्नुपर्छ,’ त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन डा. रमेशकान्त अधिकारीले भने, ‘मेडिकल कलेजका शिक्षकहरू नै नाम मात्रका भएकाले (खाना पूर्ति) पनि गुणस्तर कमसल भएको हो ।’ निजी मेडिकल कलेजमा गुणस्तरीय शिक्षाप्रति प्रतिबद्घताभन्दा पनि आफ्नो लगानीको सुरक्षा गर्ने र नाफा कमाउने मात्रै प्रवृत्ति विद्यमान रहेको उनी बताउँछन् । हाल मुलुकमा चिकित्सा पढ्नेमाकरिब ५० प्रतिशत ग्ल्यामरर अभिभावकको रुचिलेआउने गरेको डा. अधिकारीको आंकलन छ ।
चिकित्साशास्त्रमा स्नातक अर्थात् एमबीबीएस गरेपछि काउन्सिलको परीक्षा पास गरेपछि मात्र नेपालमा ‘प्राक्टिस’ गर्न पाउने कानुुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले २०५८ फागुुन २५ गतेभन्दा पछि एमबीबीएस पढेर आउने सबैलाई लाइसेन्स परीक्षा अनिवार्य हुुने फैसलागरेको थियो ।- कान्तिपुर दैनिक